१८ वटा गैंडाहरु नेपाल सरकारले विभिन्न देशलाई उपहार …. – Tourism News Portal of Nepal
१८ वटा गैंडाहरु नेपाल सरकारले विभिन्न देशलाई उपहार ….
साउन १४, काठमाडौं । सरकारले दुई साताअघि चीन सरकारलाई दुई जोडी (चारवटा) गैंडा उपहार दिने निर्णय गरेको छ । नेपालले उपहारस्वरुप गैंडा पठाएको यो पहिलोपटक होइन ।
सरकारले यसअघि पनि उपहारका रुपमा यसअघि विश्वका केही देशहरुलाई गैंडालगायतका जनावरहरु उपहार पठाउँदै आएको छ । अहिलेसम्मको सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायत र जर्मनीदेखि चीनलाई २२ वटा एकसिंगे गैडा उपहार पठाउने निर्णय गरेका छ भने १८ वटा गैंडाहरु नेपाल सरकारले विभिन्न देशलाई उपहार दिइसकेको छ ।
चीनलाई भने नेपालले पहिलोपटक गेंडा उपहार दिन लागेको हो । भारतलाई सन् १९८५ मा चारवटा गैंडा उपहार दिइएको थियो । त्यस्तै सरकारले अमेरीकालाई हालसम्म ६ ओटा गैंडा उपहार दिएको छ । सन् १९८७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी राष्ट्रिपति रोनाल्ड रेगनलाई एक जोडी गैंडा उपहार पठाएको थियो । त्यही मितिमा अमेरिकाकै नेशनल जियोलोजिकल पार्कका नाममा अर्को एक जोडी गैँडा उपहार पठायो । सन् १९९० मा अमेरिकाकै र्फटवर्ट जियोलोजिकल एसोशियसनलाई एक जोडी गैँडा पठाएको थियो ।
सन् १९९० मा जर्मनीको एक चिडियाखानाका लागि एउटा गैंडा उपहारका रुपमा पठाएको थियो । पछि सन् १९९३ मा पुनः अर्को एउटा पोथी गैंडा पठाइएको थियो ।
सन् १९९० मै सिंगापुर सरकारलाई एक जोडी वयस्क गैंडा उपहार पठाएको थियो । बेलायतलाई भने सन् १९९८ मा एक जोडी गैंडा उपहार दिइएको थियो ।
यस्तै बंगलादेशलाई सन् १९९३ मा एक जोडी गैंडा उपहार पठाइयो । नेपाल सरकारले सन् २००२ मा जापानलाई एक जोडी र अष्ट्रेलियालाई अर्को एक जोडी गैंडा उपहार पठाएको थियो ।
यसैगरि सरकारले विभिन्न देशलाई घडीयाल गोही, त्यसका अण्डा, चितुवा र ब्वाँसोसमेत विभिन्न देशलाई उपहार पठाएको इतिहास छ ।
सरकारको तथ्यांक अनुसार सन् १९९२ सेप्टेम्बर २२ मा नेपालले जापानलाई एउटा हिमाली ब्वाँसो उपहार दिएको थियो । त्यस्तै सन् १९९८ साउदी अरबको रियाद जियोलोजिक गार्डेनलाई नेपालले दुईवटा चितुवाहरु उपहार दियो ।
सन् १९९४ अक्टोबर ३ मा जापानलाई ३० वटा घडियाल गोहीका अण्डा र ३० वटा मयुरका अण्डाहरु उपहार पठाएको वन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसलगत्तै अर्को वर्ष १९९५ मे ३ मा जापानले फेरि ३०÷३० वटा घडीयाल र मयुरका अण्डा दिएको मन्त्रालयको तथ्याङकले देखाएको छ ।
सन् २००० मे ९ मा फ्रान्सलाई नेपालले चारवटा पोथी र एउटा भाले घडियाल उपहार पठाएको थियो । सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपालले भुटानलाई दुईवटा भाले घडीयाल पठाएको थियो । त्यस्तै जर्मनीलाई सन् १९९० अप्रिलमा दुईवटा घडीयाल दिइएको थियो भने जापानले १९८७ मा एउटा घडीयाल लगेको थियो ।